आशिक साह को रोमान्टिक कथा ‘परि’ Part 14 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ - CHHEPARO
आशिक साह को रोमान्टिक कथा ‘परि’ Part 14 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
May 25, 2017 lchapagain4@gmail.com 'परि'-14 0
धन्यबाद दिए उसकी मनलाइ । मेरो मनको कुरा सुनिदिएको मा ।
उसकी फ्रेन्डसिप कै लागि मेरा कति धेरै प्रयासहरू विफल भएका थिए ।
खैर मैले चाहेको अाधा कुरा त पूरा भयो । अब आधा कुरा पूरा हुन्छ कि नाइ ? त्यो म कल्पना मात्र गर्न सक्थे । मेरो मत्लब ।
उसलाइ आफ्नो प्रेमिका बनाउने चाहना पूरा हुन्छ कि नाइ ? । त्यो त समयले नै बताउछन् ।
दुबै जना क्लास तिर लागे । लुरु लुरु । अनि एउटै बेन्चमा बसे । तर अरु दिन भन्दा भिन्न थियो त्यो दिन । धेरै नै भिन्न । कम से कम मेरा लागि ।
हो यही दिन कै लागि मैले हजारौं पल्ट भगवान लाइ प्रार्थना गरेको थिए । हेर त बिज्ञान पढेका मान्छे ! कहिले काही भगवान मा पनि निर्भर हुदो रहेछ ।
खेर म भको थिए उसकै लागि । त्यो बेला म आफै बाट आफै आश्चर्यचकित भए ।
एकछिन पछि क्लास सुरु भयो । मलाइ भने बोर लागिरहेको थियो सरको लेक्चर ।
हुन त मलाइ कहिले पो पढाइ मा मन लागे थियो र ? । नोटबुक को एउटा पाना च्यातेर ।
त्यसमा लेखे । तिमीलाइ बोर लागेन ? । अनि परी की अगाडी राखि दिए । उ कागज उठाएर पढी अनि त्यसको पछाडी केही लेखेर फर्काइ ।
अहँ छैन अनि तिमीलाइ ?
त्यै क्रम चल्नु थाल्यो । उसले लेखेको म पढ्दे र फर्काउथे । उ पनि त्यसतै गर्थी ।
धेरै नै !
तिमीलाइ कहिले पो पढ्न मन लागे थियो र ? उसले मलाइ व्यङ्ग्य गरी ।
म हल्का हासे । अनि लेखे कहिले थाहा पायौं र ?
सधै ! तिमी आएकै दिन देखि म नोटिस् गर्दै छु !
हि ही लेखी त्यसको छेउमा दुई वटा समाइली पारिदिए
हेरन , कस्तो कालो दात देखाको
मलाइ त झनै हासो उठ्यो र लेखे । के रे मेरो कालो कि तिम्रो ? आफु त एकबर्ष मा एक पटक ब्रस गर्छौ होला अनि मलाइ भन्ने ।
ल देखाउ त पहिला , कस्को बढी सेतो रहेछ
हामी दुबै जना दात निकालेर , एकअर्कालाई देखाए । त्यतिन्जेल सब बिधार्थीहरू हामी तिर हेरेर सक्ड भएका थिए ।
मेरो सेतो रैछ मैले लेखे
अोइ उता हेर त सर तिर
किन के भयो र ?
सरको दात हेर्यौ ? कस्तो कालो
उ भने मुखमा हात राखेर सक्दो हासो थामी । नत्र पुरै क्लास मै कम्पन छुट्ने गरी हास्थी होली ।
हो हइ , सायद सरको बुढी ब्रस गर्न पनि दिनु हुन्न रहेछ
उ अझै हासी । म भने फेरी लेखेर दिए
सरको नाक हेरन , कस्तो थेप्चे । सायद उहाको बुढीले खाना पकाउने बेला मा बेलन ले नाक मै हानेकी हुनु पर्छ ।
यो पल्ट उ हासो थाम्नै सकिन क्यारे ! मज्जाले हासी । पुरै क्लास मा गुजिने गरि । मेरो अवस्था पनि त्यसतै थियो । उता सब जना सक्ड भइ हामीलाइ हेरिरहेका थिए । वाट हेपेन्ड ? सरले सोध्नु भयो । तर पनि हाम्रो हासो कम भइरहेको थिएन । यु टु गेट आउट उहाले झर्किदै भन्नु भयो । सरको चर्को अवाज सुनेर हल्का डर लाग्यो । अनि शान्त भए र चुपचाप भइ बसे । आइ सेड गेट आउट फेरी झर्केर नै भन्नु भयो । बूढोको पारा गरम भएको रहेछ । मनमनै सोची । बाहिर निस्के क्लास बाट । निस्किने बेला मा उहाले हामीलाइ इडिएटस् भन्दै गरेको सुनेको थिए । हामी दुबै मौन थिए । तर जब हामी क्लास बाट बाहिर निस्कियौँ । पुन: जोरले हास्नु थाले । पेट मिचि मिचि हासे । हासेर आशु बग्नु थालेको रैछ उसकी आखा मा । म एकछिन शान्त भएर उसैले हास्दै गरेकी हेरिरहे । उ हास्दा अझ राम्री लागि मलाइ । खुबै राम्री ।
जे होस् हाम्रो मित्रता ले कहिले नबिर्सिने पल बनायो । म यो छनलाइ जिन्दगी भरी बिर्सिनु सक्दिन ! मेरो मुखबाट फुत्त निस्कियो । मि टु उ अलि शान्त भइ र मेरो आखामा आफ्नो आखा जुधाएरै भनि । धन्यबाद आशिक । मलाइ यति धेरै खुसी दिएको मा । तिमी जस्तो साथी पाएको मा म आफुलाइ धेरै नै लक्की ठान्छु । म त जहिले तिमीलाइ खुसी राख्न चाहान्छु मात्र तिमी मेरो भइ देउन । म भन्नु चाहन्थे तर सकिन । त्यत्रो हिम्मत कहाँ बाट आओस् ? ।
पिरेड सकियो । अनि एकैछिनमा सर बाहिर आउनु भयो । हामी उहालाइ हेरेर मौन भए र अ-आफ्ना सिर झुकाए । उहाँ भने रिसाएको नजर हामी तिर फ्याक्नु भयो र एकैछिन मा लाग्नु भयो । अफिस तिर लुरु लुरु । सर कै क्लास मा सर लाई नै बिल्ला हानेको सम्झेर नी जोर ले हासो उठ्यो । अनि पुनः हास्नु थाले । साथै उ पनि । क्लास मा फर्किदा । साथीहरू सब आश्चर्यचकित भएका थिए । केही ले त प्रश्न पनि गर्यो । के भयो ? किन हासेको तिमीहरू । साथीहरु को प्रश्न सुनेर हामीलाइ अझ हासो लाग्यो । र उनीहरू प्रश्नलाइ हावा मा उडाइ दिनु मन लाग्यो । किनकी मलाइ तीनीहरुको प्रश्नको उतर दिनु थिएन । वा भनौ ती कुरा गोप्य नै राख्नु मन लाग्यो । उतर नदिदा । साथीहरू सब जिलिएका थिए । होस् हासो पनि कारन दिनु पर्छ यिनीहरू लाई म मनमनै भन्दै ती कुराहरू लाइ गोप्य नै राखे ।
About lchapagain4@gmail.com	746 Articles
आशिक साह को रोमान्टिक कथा ‘परि’ Part 13 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
आशिक साह को रोमान्टिक कथा ‘परि’ Part 15❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️